कतारका लागि भिसा - अरबी दोहा शहरमा पुस्तक र काम लाइभ!
तपाईंले कतार पाउनुभयो!
कतारको लागि भिसा प्राप्त गर्नुहोस्!
कतारको भिसा - हामी सबै कतार जीवनशैलीलाई माया गर्छौं! त्यसोभए, यदि तपाईं सोचमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ कुनै तरिका छ एक पटक तिर्नुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् भिसा कतारमा काम + हामी तपाईंको उत्तर हो। अवश्य पनि, जब तपाईं सबै आवश्यक कागजातको लागि एकचोटि भुक्तानी गर्नुहुन्छ तपाईंलाई फेरि कहिले भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्दैन। हाम्रो संगठनको उद्देश्य भनेको तपाईंलाई कतारमा पुग्न मद्दत गर्नु हो र सँधै यो सुनिश्चित गर्नु हो कि तपाईं त्यहाँ समयमै आउनुहुनेछ र हाम्रो पक्षमा पूर्ण सहयोग प्रदान गरिनेछ। यस प्याकेजको साथ तपाईले 60 दिन + मनी फिर्ता ग्यारेन्टीमा काम पाउनुहुनेछ!
दुबई शहर कम्पनीको साथ कतारमा पुनःस्थापना गर्नुहोस्
दुबई शहर कम्पनी एक उचित रोजगारी भिसा वा व्यवसाय भिसा प्राप्त गर्न वा युएईमा अन्यसँग सम्पर्क गर्न एक तरिका हो। अपग्रेड गरिएको खाताको साथ तपाईले मध्य पूर्वमा नयाँ व्यापार र क्यारियर अवसरहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
दुबई कम्पनीको प्रिमियम भिसा खाता पहुँचले तपाईंलाई मध्य पूर्वको बारेमा अझ बढी सिक्ने आदर्श अवसर दिन्छ। हाम्रो कम्पनीले अरूको ध्यानाकर्षण गर्न मद्दत पुर्‍याउन अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारीहरूका लागि समुदाय बनाउँदछ। कतारमा जानुहोस् र कतार, युएई, कुवेत मा उत्तम विश्वको व्यापार र क्यारियर प्रबन्धकहरूसँग सम्पर्क राख्नुहोस्। हामी मध्य पूर्वमा सबैभन्दा मान्यताप्राप्त भिसा प्रदायक हौं।
त्यहाँ पुग्नुहोस् र ध्यान दिनुहोस् अन्य कतारी मानिसहरूसँग। यो देश काम गर्न र एक एक्स्प्याटको रूपमा प्रत्यक्ष बस्ने ठाउँ हो। त्यहाँ एक मात्र नकारात्मक पक्ष छ। तपाई कहिले पनि कतारी नागरिक बन्न सक्नुहुन्न। तर तपाईं धेरै पैसा बनाउन सक्षम हुनु हुनेछ र
यो तपाईको मध्य पूर्व यात्रा तिर पहिलो कदम चाल्ने अवसर हो!
कतार विस्तार भइरहेको छ!
नयाँ परियोजना मध्य पूर्वमा सर्दै। कतार एयरलाइन्स, दुबईबाट एमार गुणहरू, ती सबै कतार, दोहा शहरमा काममा लिइरहेका छन्। उदाहरणहरु मध्ये एक 2022 मा कतार विश्व कप हो। मध्य पूर्वमा काम सुरु गर्न हजारौं कामदारहरू, साथै प्रबन्धकहरू निम्न बर्षहरूमा आवश्यक हुनेछ।
पहिलो 30 दिन नि: शुल्क छन्!
दुबई शहर कम्पनीको साथ केवल $ 1 / महिनाको लागि सुरू गर्नुहोस्
कतारको भिसा - हामी सबै कतार जीवनशैलीलाई माया गर्छौं! 60 दिन + पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी भित्र काम पाउनुहोस्! कतारमा कामको लागि प्रायः सबैले आवेदन दिन सक्छ। यदि तपाईं सोचिरहनु भएको छ कि कतारमा अन्यत्र जाने कुनै उपाय छ? हामी तपाईंको उत्तर हो! हाम्रो विशेषज्ञहरूको टोलीले तपाईंलाई त्यहाँ राख्नेछ। अवश्य पनि, तपाईले सबै आवश्यक कागजातको लागि एक पटक मात्र पैसा तिर्नु पर्छ। हाम्रो संगठनको उद्देश्य भनेको तपाईंलाई कतारमा पुग्न सहयोग पुर्‍याउनु हो, तपाईंलाई मानव संसाधन प्रबन्धकहरू र भिसा प्रदान + आवास + मध्य पूर्व मा काम। हाम्रो वरिष्ठ व्यवस्थापकहरू जहिले पनि यो सुनिश्चित गर्दै कि तपाईं त्यहाँ समयमै आउनुहुनेछ र हाम्रो पक्षमा पूर्ण समर्थन प्रदान गरिनेछ।